ASA SOA : Nizara fitaovam-pianarana sy lalao ny Ank’izy ary ny Association EAL | Madatopinfo
ASA SOA : Nizara fitaovam-pianarana sy lalao ny Ank’izy ary ny Association EAL
Vita soa amantsara ny hetsika niarahan’ny Association Ank’Izy na Ankin’ny ho avy izy sy ny Association EAL na Espace Acceuil Loisir La Rotja ny faran’ny volana Aogositra sy voalohan’ny volana Septambra teo. Raha ny tamin’ny Zoma 31 Aogositra teo dia nizara fitaovam-pianarana ho an’ireo ankizy rehetra tao amin’ny Sekoly fanabeazana fototra na EPP Ambohibato Ambohimanambola no asa soa natao. Ny isan’ny mpianatra nizarana fitaovana dia miisa 340 eo ary ireto avy no nozaraina tamin’izany: kahie 4 avy, pensily haho, goma, penina 4 loko. Tsy nohadinoina ihany koa ny nanome fampitaovana ny EPP tahaka ny «tableau blanc 5, marker», kilalao «échec sy dame».
Ny Asabotsy 1 Septambra kosa dia hetsika niarahana teny amin’ny akany Anjanamasina no natao. Izany dia natomboka tamin’ny hetsika fanaon’ny association ank’Izy izay miezaka mitondra fanentanana, fampivelarana feno ny maha-olona ireo ankizy. Niara –namaky boky, nianatra teny anglisy ary koa nianatra lalao maro isan-karazany.
Nanome fampitaovana ireo ank’izy ihany koa ny EAL sy ny Ank’Izy , toy ny kahie 4 avy, pensily haho, goma, penina, fitaovana hanaovam-baolina, akanjo, borosy nify. Tsy nohadinoana ihany koa ny ivon-toerana izay nanolorana solosaina 2, “table ping pong, raquette, baolina ping pong”, kilalao échec sy dame”. Ny solotenan’ny Association EAL dia nampanantena fa mbola hitohy ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana ireo toerana roa ireo amin’ny taona manaraka. Raha ny hetsika ank’izy indray no lazaina dia hanomboka rehefa miditra mianatra ny mpianatra eny anivon’ny EPP.
Anjarasoa Nandrandraina MIRANA/ Haja NIRINA